10 Zvinoshamisa Zvemukati Zvekunyora Maturu Ekushamisa Kushambadzira | Martech Zone
Chitatu, Kurume 13, 2019 Svondo, Kurume 7, 2021 Joe McLean
Zvakaoma kuwana mazwi akakodzera ekutsanangura simba uye kwese kwese kwekunyora zvemukati. Wese munhu anoda zvemukati zvemazuva ano - kubva kumaamateur mabloggi kuenda kumakambani epasi rese kuyedza kusimudzira zvigadzirwa zvavo nemasevhisi.
Sekureva kweshumo, makambani ayo blog anogamuchira 97% zvimwe zvinongedzo kune avo mawebhusaiti kupfuura avo vasiri- mablogging avo. Chimwe chidzidzo chinoburitsa pachena kuti uine blog sechikamu chakakosha chewebsite yako inokupa mukana uri nani wekuva 434% yakarongwa zvakanyanya pane injini dzekutsvaga.
Asi kuti uve munyori akabudirira, unofanirwa kushandisa mamiriro emaapps nema plugins. Vabatsiri veDhijitari vanogona kukubatsira iwe kunatsiridza kunyora kwako, saka ramba uchiverenga kuti utarise gumi anoshamisa zvemukati zvinyorwa zvekushandisa zvekushambadzira kunoshamisa.
1. Blog Nhaurwa jenareta
Kuwana nyowani yezvinyorwa zvemukati hazvisi nyore kana uchifanira kutsikisa zvinyorwa vhiki rega rega kana kunyangwe zuva nezuva. Ndosaka Hubspot gadzira iyo Blog Nhaurwa jenareta kubatsira vanyori mukutsvaga iwo akakwana musoro wenyaya yavo saiti. Maitiro acho akapusa: pinda kiyi uye chishandiso chinokuratidza akati wandei mazano.
Semuenzaniso, isu takapinda Marketing uye akagamuchira mazano anotevera:
Kushambadzira: Zvinotarisirwa vs. Reality
Kushambadzira kuchazombotonga pasi rese here?
Chinhu chikuru chinotevera mukushambadzira
Kushambadzira kwakatsanangurwa mune isingasviki 140 mavara
Hubspot Blog Nhaurwa jenareta FATJOE Blog Nhaurwa jenareta
Kana iwe uchida kuona kuti zvinhu zvinoshanda sei kunze kweiyo Google Keyword Planner, tinokurudzira kuti uedze iyiKeyword Chishandiso. Ipuratifomu inokwanisa kuburitsa anopfuura mazana marefu longtail keyword mazano ezvese nguva yekutsvaga.
Ichi chishandiso hachisi kana kukumbira iwe kuti ugadzire yakakosha account, kuti iwe ugone kuishandisa zvachose yemahara nguva zhinji sezvaunoda. Izvo zvaunogona kutarisira kubva kuKiyi kiyi Yekushandisa ndeyekukurumidza kuona zvakajairika kutsvagirwa kweGoogle uye uwane mazwi akakosha anoenderana zvakakwana nezvido zvevateereri vako.
Pano panouya chimwe chedu chavanofarira, Coffitivity. Iyi chikuva chakagadzirirwa imi mese mweya yemahara kunze uko inofarira kushanda kunze kwehofisi asi isingakwanise. Coffitivity inodzoreredza iwo ambient manzwi eiyo cafe kusimudzira kugona kwako uye kukubatsira iwe kushanda zvirinani.
Iyo inopa akasiyana siyana ambient mhere, kubva mangwanani kugunun'una uye Café de Paris kusvika masikati masikati lounges uye Brazil bistros. Coffitivity inokupa iwe kunzwa kwekushanda mune inotonhorera uye kutonhodza mamiriro ekunze, inova yechokwadi yekukurudzira inosimudzira kune vazhinji vanyori.
4. Ramba Wakatarisa
Kuverengera kuve mhondi yekugadzira, asi kune nzira dzekugadzirisa nedambudziko iri, futi. Ramba Wakatarisisa unowedzera kugadzirwa kwako nekudzikamisa iyo nguva yenguva yaunogona kushandisa pane nguva-kutambisa mawebhusaiti. Chinoshanda sei?
Iyo plugin inoyera nguva yaunoshandisa online uye ichivhara zvese maficha nekukurumidza kana yakatarwa nguva yashandiswa kumusoro. Iyo inomanikidza vanoverengera kuisa pfungwa pamabasa avo uye inovabatsira kuzadzikisa mabasa ezuva nezuva nezvinangwa. Isu tinotenda pachena kune vatinoshanda navo ku Essay Kunyora Nyika yekutizivisa isu kune ino inoshamisa chishandiso!
5. 750 Mashoko
Vanoda kusvika zviuru mazana mashanu vanyori pasi rese vanoshandisa mazana manomwe nemakumi manomwe Mashoko semubatsiri anokosha wekunyora. Ichi chishandiso chinoitwa nechinangwa chimwe chete - kubatsira mabloggi kugamuchira tsika yekunyora zuva nezuva. Sezvakangoita zita rayo, saiti inokurudzira vagadziri vezvinyorwa kuti vanyore anokwana mazana manomwe emazwi (kana mapeji matatu) zuva rega rega. Izvo hazvina basa kuti chii chauri kunyora nezvacho sekureba sekunge uri kuzviita nguva dzose. Chinangwa chiri pachena: kunyora kwemazuva ese kunouya kwauri otomatiki mushure mechinguva.
6. Kumhanyisa Chinyorwa changu
Kunyora zvinyorwa zvemablog kwakaoma, asi kunyora zvinyorwa zvepamusoro-soro kwakanyanya kunetsa. Ichi ndicho chikonzero vamwe vanyori vachishandisa Rushmyessay, iyo agency inoshandisa vakawanda vanyori vane ruzivo mumatunhu ese ehunyanzvi.
Craig Fowler, a headhunter pa UK Mabasa Ekusimudzira, anodaro Rushmyessay anonyanya kuhaya vanhu vane Master kana PhD madhigirii anovimbisa kukurumidza kuendesa uye yepamusoro-notch mhando. Chinotonyanya kushamisa ndechekuti Rushmyessay inopa vatengi 24/7 rutsigiro rwevatengi, kuti iwe ugone kutumira meseji kana kuvapa foni pese paunoda.
Kumhanyisa My Essay
7. Ongororo Tsoko
Zvakanakisa zvinyorwa zvinonakidza uye zvinobata, saka zvinokurudzira vashandisi kutora matanho nekubvunza mibvunzo kana kusiya zvirevo. Kana iwe uchida kuita kuti zvinyorwa zviwedzere kupindirana, iwe unofanirwa kushandisa Survey Monkey. Iyo yakapusa ongororo dhizaini iyo inokutendera iwe kuumba uye kushambadzira online online polls mukati memaminitsi. Nenzira iyoyo, iwe unogona kurega vateveri vako kuti vasarudze izvo zvakakosha uye kunyange kuzvishandisa sechinhu chekurudzira kune ramangwana blog blog.
Kuburitsa zvinyorwa pasina kugadzirisa haimbove zano rakanaka. Iwe unofanirwa kutarisa chidimbu chidiki chemavara kuti uve nechokwadi chekuti hapana zviperengo kana girama zvikanganiso. Nekudaro, iri rinogona kuve basa rinotyisa kana iwe uchida kuzviita nemaoko, saka tinokurudzira kuti ushandise Grammarly. Iyo inozivikanwa yekuverenga kuverenga plugin inogona kutarisa zvese zvinyorwa mukati memasekondi uye kusimbisa zvikanganiso, zvinyorwa zvakaoma, uye zvimwe zvakawanda zvimwe zvinoita kuti zvemukati zvive zvisina kukwana
Kana iwe usiri kuda muchina kuti uverenge zvinyorwa zvako, pane imwe mhinduro iri nyore. Iyo inouya muchimiro cheGgradeMiners, yekunyora uye yekugadzirisa agency ine gumi nemaviri ehunyanzvi edhita. Iwe unongoda kuvapa foni uye ivo vanokurumidza kukupa iwe account account maneja uyo anotora pamusoro penyaya. Uchishandisa sevhisi, iwe haungatarisire chero chinhu chakaderera pane kukwana kukwana uye dhizaini-huchenjeri.
Yekupedzisira chishandiso pane yedu runyorwa ndeyechokwadi yeinonyanya kufadza. Cliché Finder inobatsira vanyori kupurinda zvirimo nekutsvaga uye kuratidza mazwi akanyanya kushandiswa kana zvirevo. Vazhinji vanhu havana hanya nedambudziko iri, asi iwe ungazoshamisika kuona mangani maficha aripo mukunyora online. Semunyori akakomba, haudi kurega izvi zviitike kwauri futi, saka shandisa Cliché Finder kubvisa kutyisidzira.
Iwo akanakisa mabloggi haasi chete akangwara uye ekugadzira asiwo anobudirira pakushandisa pamhepo kunyora maapplication uye plugins. Izvi zvinobatsira vanyori kuti vanyore nekukurumidza uye vagadzire zvirinani zvinyorwa vhiki nevhiki, chinova chikonzero chakakosha chekuve wepamusoro-chikamu chemukati dhizaini.
Takakuratidza iwo runyorwa rwegumi anoshamisa zvemukati ekunyora maturusi ayo anogona kukubatsira iwe kuvandudza ako ekushambadzira zviitiko. Ita shuwa yekuvatarisa uye nyora chirevo kana iwe uine mamwe mazano anonakidza ekugovana nesu!
kuburitsa: Martech Zone irikushandisa hukama hwayo hwehukama hweGrama mune ichi chinyorwa.
Tags: blog musoro wenyaya jenaretacoffitivitymhanyisa rondedzero yangumaturusi ekunyora